Pero: Nitsidika an’i Lima ireo tompondaka roa erantanin’ny lalaon-tsaina echec · Global Voices teny Malagasy
Pero: Nitsidika an'i Lima ireo tompondaka roa erantanin'ny lalaon-tsaina echec
MpanoratraGabriela García Calderón
Voadika ny 28 Jona 2010 15:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, English
Nandritra ny roa andro, dia nampiantrano an'ireo tompondaka roa erantanin'ny echec, Gary Kasparov sy Anatoly Karpov i Lima. Samy tonga hanao lalao fampisehoana izy roa ireo, izay nifanandrinan'izy ireo tamina ankizy 25: 20 amin'izy ireo dia nofidian'ny Federasiona Perovianin'ny lalaontsaina Echec ary ny ambiny dia nalaina avy amin'ny mpijery. Na dia ny baolina kitra aza no mpanjakan'ny fanatanjahantena rehetra any Pero, ary na nosakanana ho tsy hiatrika ireo fifaninanana iraisam-pirenena aza ny echec Peroviana, dia tsy nandalofotsiny tamin'ireo mpitoraka blaogy sasany izany.
Tamin'ny volana May, Hugo Melo, mpitoraka blaogy ao amin'ny El ajedrez es cultura (kolontsaina ny echec), nanamarika tantara iray tao amin'ny blaoginy[es] mikasika ilay fitsidihana:
[Ny Ivontoerana Peroviana ho an'ny Fanatanjahantena (IPD, raha ny anarany amin'ny teny Espaniola)] nanasongadina fa ny fahatongavan'ireo “olo-malaza roa velon'ny echec”, izay mbola tsy fantatra ny daty hahatongavany, “dia tena hanampy betsaka ireo mpilalao echec ao an-toerana”.
“Ny fahaizan'izy ireo amin'ny maha tompondaka erantany azy dia tsy isalasalàna fa tena ilain'ireo tanora mpilalaontsika ”, hoy izy.
Ao amin'ny blaoginy Nido de erRatas [es], Carlos Tovar dia mizara tantara vitsivitsy momba ireo mpilalao roa ireo:
Karpov sy Kasparov dia teo anivon'ny fifanandrinana naharitra indrindra teo amin'ny latabatry ny echec tanatin'ny tantaran'ny echec. Ny fomban'i Karpov, mandanjalanja sy mampiasa saina, miaraka amina fironana miharihary ho an'ireo fitoerana mazava ka ao anatin'izay ny kajikajy mazava izay làlana hahitana ny fandresena azo eritreretina, dia tena mifanohitra tanteraka amin'ny fomban'i Kasparov, maranitra ara-pomba sy mailamailaka, miaraka amina fironana mankamin'ny fanasarotana, ao anatin'izay ny tsy fahampian'ny kajikajy amin'izay tokony haleha mandritry ny fifanintsanana, fa arahana tsindrimandry fotsiny.
Ity fifanandrinana taloha ity dia lasa finamanana, araka izay lazain'i [es] Monty Python ao amin'ny blaogy Otras tardes :
Karpov dia hahazo tombony amin'ny fijanonany any Pero mba hampitomboany ny lanjan'ny firotsahany ho Filohan'ny Federasion'ny Echec Erantany -FIDE, izay tohanan'i Kasparov izay mpifanandrina taminy fahiny .
Tamin'ny Talata 22 Jona, dia tsy nila adiny roa akory ireo tompon-daka roa ireo handresena ireo ankizy 25 voafantina. Ankoatry ny fahatanoran'izy ireo, dia natoky tena tamin'ny fikisahany ireo ankizy. Tamin'io andro io ihany, dia niverina tany Bolivia i Karpov sy Kasparov.
Christian Torres (@vergato) dia nisaotra ireo kintana roan'ny echec ireo ao amin'ny Twitter:
Misaotra anareo tompoko noho ny fahatongavanareo!!! Kintana 2 aty Pero …
Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Mukumbura, nampiasaina ny Creative Common lisense.
Goatemalà 4 andro izay